3 mitambo uye kunyorera mahara kana kutengeswa kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Tinouya kuChina uye tinotanga kuzvivhiringidza zvishoma nezvishoma pamba, mukirasi, kubasa ... Vhiki rapera rava kusvika, uye rinoratidza. Iyo kuverenga kusvika kumatatu yatanga (tsime, yakatanga neMuvhuro patinongovhura maziso edu mangwanani), uye kubvira IPhone nhau Tichiri kutsunga kuita kuti kumirira kuve kwakanyanya kutakura uye ndosaka nhasi tichikuunzira batch nyowani ye yemahara kana yakanyanya kushomeka mitambo uye maapp kuti iwe unogona kuwana izvozvi uye chete izvozvi.
Rangarira izvo, kunze kwekusara kwaticharatidza, zvese zvinotevera zvinopihwa zviripo inoshanda kwenguva shoma. Izvi zvinoreva kuti isu tinogona chete kuvimbisa huchokwadi hwavo panguva yekutsikisa ichi posvo, asi kwete mushure, nekuti isu hatizive pavanopera. Naizvozvo, isu tinokukurudzira kuti uzvidzivirire nekukurumidza sezvazvinogona kuti ubatsirwe nezvibodzwa. Uye kana iwe ukanonoka, usatambura, pachave nemikana yakawanda uye zvitsva zvinopihwa.
2 Simbi Gitare
Isu tinotanga sezvazvinofanirwa, nemutambo wakanaka uyo zita rake rinotokuudza izvo zvemakanika nezve. «Kuvaka Simulator 2» ndeye chaiyo yekuvaka mutambo mauchazokwanisa kutyaira chaiyo yekuvaka michina kubva pamhando dzakadai seCaterpillar, Liebherr, Palfinger, Bell, STILL, ATLAS naKenworth. Tora kuraira kwema cranes, marori, matirakita, maconcrete mixers, asphalt michina uye zvimwe zvakawanda uye kuvaka zvivakwa, migwagwa ...
«Kuvaka Simulator 2» inokupa iwe anopfuura makumi mana michina dzakasiyana uye anopfuura makumi matanhatu mabasa ekuvaka. Kana iwe uchishuva nezvenyika ino, kana iwe uchingoda kuyedza, tinokukurudzira kuti utore pasi izvozvi pane yako iPhone kana iPad.
"Kuvaka Simulator 2" ine mutengo wenguva dzose we € 4,99 asi ikozvino unogona kuiwana ine 40% dhisikaundi kwe € 2,99 chete paApp Store.
Construction Simulator 22,99 €
«Simbi Gitare» chikumbiro chaunogona nyora zvako nziyo nyanzvi kubva ku iPhone yako kana iPad. Kune izvi iwe une muunganidzwa wakakura wemagitare (kubva pamatanhatu-tambo emagetsi kuenda kuacoustic, 6-tambo uye kusvika pamasere nemasere gumi), ma amplififita (kusanganisira ese akanyanya mhando kubva kuma12s), gumi nematanhatu mhedzisiro uye nyore- kushandisa-kudhonza-uye-kudonhedza mushandisi interface.
"Simbi Gitare" ine mutengo wenguva dzose we € 1,09 asi ikozvino unogona kuiwana mahara. dzakasununguka zvachose paApp Store.
Simbi Gitare1,09 €
Uye isu tinopedzisa nemumwe mutambo, «Hashi Link Pro», mutambo waunofanira batanidza zviwi kune mumwe nemumwe nekuvaka mabhiriji nenzira yekuti huwandu hwezviwi hwakaenzana nenhamba yemabhiriji anovabatanidza. Nyore? Zvakanaka, iwo mutambo wezano repfungwa saka ini handingave nechokwadi.
"Hashi Link Pro" ine mutengo wenguva dzose we € 3,49 asi ikozvino unogona kuiwana mune dzakasununguka zvachose paApp Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » 3 mitambo uye maapps emahara kana ari kutengeswa kwenguva shoma